Dr. Tint Swe's Writings: Workplace and stimulant drugs လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု
Workplace and stimulant drugs လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု
စောစောကပဲ ဆေးခြောက်အဆီဆေး ဆရာဝန်လက်မှတ်မလိုပဲ ရောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း တင်လိုက်တယ်။ ဒီစာကိုလည်း မနှစ်က မေဒေး ခေါ် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့မှာ ဒီစာကိုရေးပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်သမားပေါင်း ၂၃ သန်း ကျော်မှာ ဆေးဝါးတမျိုးမျိုးသုံးစွဲနေကြတယ်။ အဲတာကလည်း ဆေးကုသမှုခံယူနေသူစာရင်းသာရှိသေးတယ်။ အသက် (၁၂) နှစ်အထက်လူဦးရေရဲ့ ၁ဝ% ရှိတယ်။ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာ တယောက်တည်းသုံးပေမယ့် မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက်ရောက်စေပါတယ်။ ငွေကြေးအရပြောရရင် တနှစ်မှာ ၁၉၇ ဘီလီယန် ရှိတယ်။
ဆေးစွဲတယ်၊ ဆေးသုံးကြတယ်ဆိုတာ တရားမဝင်ဆေးတွေသာမကာ တရားဝင်ဆေးတွေကိုပါသုံးစွဲကြတာဖြစ်တယ်။ Painkillers အနားသက်သာဆေးတွေ၊ barbiturates အိပ်ဆေးတွေ၊ stimulants စိတ်ကြွဆေးတွေနဲ့ addictive စွဲစေတတ်တဲ့ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်လူငယ်လူရွယ် ၂ဝ% တို့ဟာ Marijuana ဆေးခြောက်သုံးနေကြတယ်။ ၄ဝ% တို့ဟာ တကြိမ်တော့ စမ်းကြည့်ကြတယ်။ ၉% တို့ဟာ Cocaine ကိုကိန်းကိုတကြိမ်တော့စမ်းကြည့်ကြတယ်။
ကမ္ဘာမှာ အရက်ကြောင့် တနှစ်မှာ လူပေါင်း ၂့၅ သန်းသေဆုံးနေကြတယ်။ အမေရိကားမှာ ၁ သိန်းသေးတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်နဲ့ ၂၉ နှစ်ကြားလူရွယ်တွေ နှစ်စဉ် ၃ သိန်း ၂ သောင်းတို့ဟာ အရက်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး သေဆုံးနေကြတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၈ အစီရင်ခံစာတွေအရ မူးယစ်ဆေးထိုးလို့ HIVပိုဖြစ်တယ်လို့ ၁၂ဝ နိုင်ငံကဆိုပါတယ်။
အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဖြတ်လိုသူတွေဟာ Counseling (ကောင်ဆယ်လင်း) ခေါ်တဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ရင် အများကြီးအကျိုးရှိတယ်။ Talk therapy စကားပြောကုသနည်းနဲ့ Best Drug Rehabilitation ဆေးပေးကုသနည်းပါ တွဲရင် အကောင်းဆုံးရလဒ်ရစေမယ်။
Japan sends biggest warship to protect US supply v...
Family of Politics
Life isabeautiful struggle ဇာတ်ဝင်ခန်း
International Day of the Midwife နိုင်ငံတကာ သားဖွါ...
Careless mistakes မှားရင်ပြင်
Events in May မေလထဲမှာ
International Workers Day နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့ အ...
Library Culture စာကြည့်တိုက် ယဉ်ကျေးမှု
One-sided Story အပြောခံတဲ့သူပဲပြော
သင်ခန်းစာ နှင့် သင်ခဏ်းစာ
Workplace and stimulant drugs လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆေးဝ...
Ear infections (1) နားပိုးဝင်ခြင်း (၁)
Cannabis Oil Cannabinoid or CBD ဆေးခြောက်အဆီ
North Korea crisis မြောက်ကိုရီးယားအရေးအခင်းသတင်း
Sense of Humor ရီစရာ တခါတခါပြော
Natural Gas ဓါတ်ငွေ့
Tibet Struggle တိဘက်အရေး
Hello Your Name is Trouble ဒုက္ခပေးခြင်း ကင်းကြပါစေ
Beauty Product Risks အလှအပသုံးရောင်းကုန်များ
ဒေါက်တာဂျော်နီ (သို့) သတ်ပုံမှား ရောင်းစားကြသူများ
Facts not fiction အဖြစ်အပျက် ဘာအတွက်ရေးသလဲ
Hepatitis viruses outside the body အသည်းရောင်ပိုးေ...
Rain clouds မိုးတိမ်တွေ
Lysine supplement လိုင်ဆင်း
လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း (၅)
Loka Niti (3) လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း (၃)
လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း (၄)
Loka Niti (2) လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း (၂)
Cushing’s disease (ကူရှင်းစ်) ရောဂါ
Jellyfish stings ရေခူအဆိပ်
Religious Fire တောမီးရှို့တာ သတိထားပါ
HIV Guideline လမ်းညွှန်ချက်သစ် (၂ဝ၁၅)
Outer Space Language အီးတီတို့တိုင်းပြည်
Chicken Pox Scars ရေကျောက်အမာရွတ်
Contraceptive patch အရေပြားကပ်ထားရတဲ့ တားဆေးကပ်ခွါ
The first-ever March for Science သိပ္ပံပညာ ဆန္ဒပြပွဲ...
Myanmar Vs Burma ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ ဧဝရက်တောင်
Real or Fake စစ်တု
Doctor-patient relationship (3) ဆရာ-လူနာ ဆက်ဆံရေး (၃)
Earth Day and Water Day ကမ္ဘာ့မြေ ကမ္ဘာ့ရေ မြန်မာ့ြေ...
Bandung Principles ဘန်ဒေါင်းမူ
Systemic Practice ဆေးရောင်း ဆေးဝယ်
Cold War Review စစ်အေးကို စမြုံ့ပြန်ခြင်း
Father of all bombs ဗုံးတွေရဲ့ဖအေ
Early hip fracture surgery will save hundreds of l...
Most Reliable News Sources ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး သတင်...
Surrogate Pregnancy ဗိုက်အငှားနည်း
Valproate အတက်သက်သာဆေး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသစ်တွေ့ရှိ
April 20 ဧပြီ (၂ဝ) ရက်
The Truth အမှန်
Unicornuate Uterus ဂျိုတခုသာပါတဲ့ သားအိမ်
Brain Size Comparison ဦးနှောက်အရွယ်အစား
Brain GPS ဦးနှောက် ဂျီပီအက်စ်
My Answer Is Sorry
Thermometer ဝိဇ္ဇာပညာနှင့် သာမိုမီတာ